Vaovao - Ahoana ny fomba hanaovana dokambarotra ny lalan-kivoahana amin'ny orinasa
Orinasa maro no manao dokambarotra ara-bakiteny ny lalan-kivoahany amin'ny mari-pamantarana ambany kalitao. Ireo orinasa ireo dia toa tsy mahatsapa ny fiatraikany ratsy aterak'ity karazana famantarana ity.
Ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny Dr. James J. Kellaris avy amin'ny Lindner College of Business ao amin'ny University of Cincinnati dia manampy amin'ny fanazavana ny maha-zava-dehibe ny takelaka famantarana avo lenta. Ny valim-pikarohana dia manondro ny mpanjifa matetika mandinika ny kalitaon'ny orinasa amin'ny kalitaon'ny signage. Ary io fahitana kalitao io matetika dia mitarika amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa hafa.
Ohatra, ity tsikera momba ny kalitao ity matetika dia mitarika amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa hiditra na tsy hiditra amin'ny orinasa voalohany. Ny fananganana fifamoivoizana an-tongotra ny mpanjifa vaovao dia metrika manakiana ho an'ny fivarotana antsinjarany mahasoa. Ity fandalinana nasionaly lehibe ity dia manondro fa ny takelaka ambony kalitao dia afaka manampy amin'izany tanjona izany.
Amin'ity toe-javatra ity, ny "kalitaon'ny signage" dia tsy midika fotsiny ny toe-batana amin'ny mari-pamantarana orinasa. Mety hidika ihany koa ny famolavolana sy ny fampiasa amin'ny signage ankapobeny. Ohatra, ny fandinihana dia milaza fa ny maha-ara-dalàna dia lafiny iray hafa amin'ny fahitana ny kalitaon'ny famantarana ny mpanjifa, ary 81,5% ny olona no mitatitra fa sosotra sy sosotra rehefa kely loatra ny famakiana takelaka.
Ho fanampin'izany, ny kalitao dia mety hanondro ny fahamendrehan'ny famolavolana famantarana amin'ny ankapobeny ho an'io karazana orinasa io. 85,7% amin'ireo namaly ny fanadihadiana no nilaza fa “ny takelaka famantarana dia afaka mampita ny toetra maha izy azy na ny toetran'ny orinasa iray.”
Mba hijerena ny lafiny mifanohitra amin'ny angon-drakitra fandinihana ity, ny fambara ambany kalitao dia azo raisina ho fomba fanaovana dokambarotra orinasa iray tsy misy orinasa. Ny fandinihana dia nanambara fa 35,8% ny mpanjifa no voasintona amina fivarotana tsy mahazatra mifototra amin'ny kalitaon'ny mari-pamantarana azy. Raha misy orinasa very ny antsasaky ny fifamoivoizana an-tongotra vaovao ho an'ny mpanjifa noho ny fambara ambany kalitao, ohatrinona ny vola miditra amin'ny fidiram-bola very? Amin'io fomba fijery io, ny fambara ambany kalitao dia azo raisina ho lalana haingana mankany amin'ny fatiantoka.
Iza no efa nieritreritra orinasa iray afaka manao doka ara-bakiteny ny lalan-kialany amin'ny orinasa? Ny hevitra iray manontolo dia toa tsy azo ekena, fa ny fikarohana ataon'ny indostria amin'izao fotoana izao dia milaza fa mety hitranga amin'ny takelaka ambany kalitao izany.
Signage tsara toy ny etsy ambany:
Fotoana fandefasana: Aug-11-2020